Ogaden News Agency (ONA) – Shirweynihii Uga Socday Copenhagen Haweenka Ogadenya oo Galay Maalintiisii Labaad
Shirweynihii Uga Socday Copenhagen Haweenka Ogadenya oo Galay Maalintiisii Labaad
Waxaa shalay ka furmay caasimadda Denmark ee Copenhagen Shirweynihii 1aad ee Haweenka Ogadenya, halkaasoo ay ka socdaan hawla badan oo muhiim ah. Waxaa Shirweynaha kasoo qaybgalay madaxda sare ee Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya oo uu hogaaminayo Gudoomiayaha ururka Adm. Maxamad Cumar Cismaan. Waxaa kaloo martisharaf u ahaa Shirweynaha haweenka umadda Somaliyeed ee dagan dalkaasi Denmark iyo haya’adaha dalkaasi Denmarka ee daneeya arimaha Bulshada gaar ahaan haweenka.
Waxa shalay khudbado kala duwan ka jeediyay martisharaftii shirweynaha kasoo qayb gashay oo ay ka mid ahaayeen Gudoomiyaha ururka, Hogaanka Arimaha Dibadda iyo Xidhiidhka Caalamiga mudane C/raxmaan Madey, Hogaanka Dhaqaalaha Drs. Cibaado. Waxaa kaloo ka hadlay Dr. Maxamud Ugaas, Abwaanad Rooda Afjano iyo martidii ka socotay dalka Denmark qaar ka mid ah.
Gudoomiyaha ayaa aad ugu dheeraaday inuu u mahadnaqo Haweenka Ogadenya doorka ay ku leeyihiin halganka ka socda gudaha Ogadenya iyo dibadaba, isagoo sheegay inay haweenka Ogadenya yihiin kuwa dhab ahaan u hogaaminaya halganka. Wuxuu Gudoomiyaha xusay dhibaatada uu gumaysiga ku hayo Haweenka Ogadenya taasoo ah dambi laga galay xuquuqda aadanaha oo aan marnaba la ilaawi doonin.
Martidii ka hadashay shirweynaha ayaa dhamaantood isku raacay inay Haweenka Ogadenya yihiin udub dhexaadka halganka ka socda Ogadenya isla markaana uu gumaysiga u gaystay dhibaato aan lasoo koobi karin oo sharaftooda iyo xuquuqdoodaba meel kaga dhacaysa.
warbixntan oo dhamaystiran ayaad kala socon doontaan haduu Ilaahay Idmo barnaamijyada Ileys iyo qoraaladanada dambe. Halkan hoose ka daawo qaar ka mid ah sawiro la qaaday waqtigii nashada shirka.